Ihowuliseyili Vape Ukuvalwa eUnited States nakwihlabathi jikelele mveliso kunye nabenzi | NGCONO
Ukuvalwa kweVape eUnited States nakwihlabathi liphela
Isimo sokuziphatha ngokusetyenziswa kwemphunga kunye nenicotine ngokubanzi ziyahlukahluka kakhulu. E-United Kingdom, ukuphapha kuyakhuthazwa ziiarhente zempilo zikarhulumente. Kungenxa yokuba ukutshaya kudala umthwalo weendleko kwiNkonzo yezeMpilo yase-UK, ilizwe limele ukugcina imali ukuba abantu abatshayayo batshintshela kwi-e-cigarettes endaweni yoko.
Uninzi lwamanye amazwe lukwavumela ukuthengiswa kweemarike ezilawulwayo, kodwa abanamdla kangako kukwamkelwa kwabo kokuziqhelanisa. E-US, i-FDA inegunya kwiimveliso zomphunga, kodwa ichithe iminyaka esibhozo idlulileyo izama ukwenza inkqubo esebenzayo yolawulo. ICanada iye yalandela imodeli yase-UK, kodwa njengaseMelika, amaphondo ayo akhululekile ukuba enze eyabo imithetho ethi ngamanye amaxesha iphikisane neenjongo zikarhulumente.
Kukho amazwe angaphezu kwama-40 aneentlobo ezithile zokuvinjelwa ekuphumeni-nokuba kusetyenziswe, ukuthengisa okanye ukungenisa, okanye ukudibanisa. Abanye banqandwe ngokupheleleyo okwenza ukukhupha okungekho mthethweni, kubandakanya ukuthintela ukuthengisa kunye nokuba nelifa. Isithintelo sixhaphakile e-Asiya, ku-Mbindi Mpuma, nase Mzantsi Melika, nangona isibhengezo esidumileyo senikotini sesase Australia. Amanye amazwe ayabhidisa. Umzekelo, ukuphuma eJapan kusemthethweni kwaye iimveliso ziyathengiswa, ngaphandle kwe-e-liquid ene-nicotine, engekho mthethweni. Kodwa iimveliso zecuba ezingatshisi ubushushu njenge-IQOS zisemthethweni ngokupheleleyo kwaye zisetyenziswa ngokubanzi.
Kunzima ukulandelela lonke utshintsho kwimithetho ekhulayo. Into esizame ukuyenza apha kukudinwa kwamazwe athe athintela okanye athintela kakhulu iimveliso zomphunga okanye zomphunga. Kukho iinkcazo ezimfutshane. Oku akuthethi ukuba sisikhokelo sokuhamba okanye iingcebiso malunga nokuhamba ngenqwelomoya kunye nokubhabha. Ukuba undwendwela ilizwe ongaqhelananga nalo kufuneka ujonge kwimithombo esexesheni kunye nomthombo onokuthenjwa njengommeli welizwe lakho, okanye iofisi yezotyelelo yelizwe olityelelayo.
Kutheni le nto amazwe evala umphunga?
Umbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO) kunye nengalo yayo yokulawula icuba uMgaqo-sikhokelo weNgqungquthela yoLawulo lweCuba (i-FCTC) - isivumelwano sehlabathi esityikitywe ngaphezulu kwamazwe angama-180- bakhuthaze izithintelo kunye nokuthintela i-e-cigarettes okoko iimveliso zokuqala zaqala ukufika eYurophu kwaye Amanxweme ase-US ngo-2007. I-WHO inefuthe elinamandla (kwaye elona linamandla) kwimpilo nakwimigaqo-nkqubo yokutshaya kumazwe amaninzi-ngakumbi kumazwe ahluphekayo, apho i-WHO ixhasa ngemali iinkqubo eziqesha iingcali ezininzi zempilo yoluntu.
I-FCTC ngokwayo ilawulwa ngabacebisi abavela kwimibutho yabucala yaseMelika yokulwa ukutshaya njengePhulo labantwana abaNgenaCuba-nangona i-US ingeyonxalenye yesivumelwano. Ngenxa yokuba la maqela alwe nezinyo kunye nesikhonkwane ngokuchasene nokuqhuma kunye nezinye iimveliso zokunciphisa ingozi yecuba, izikhundla zabo zithathiwe yi-FCTC, neziphumo ezibi zabantu abatshayayo kumazwe amaninzi. I-FCTC icebise amalungu ayo (uninzi lwamazwe) ukuba avalwe okanye alawule kakubi i-e-cigarettes, ngaphandle komnqophiso wesivumelwano sokudweliswa kokuncitshiswa njengesicwangciso esinqwenelekayo solawulo lwecuba.
Uninzi lwamazwe luxhomekeke kwintengiso yecuba, ngakumbi ukuthengisa umdiza, kwingeniso yerhafu. Ngamanye amaxesha, amagosa aseburhulumenteni athembekile kukhetho lwawo lokuthintela okanye ukuthintela iimveliso ezikhutshulayo ukugcina ingeniso yecuba. Rhoqo oorhulumente bakhetha ukubandakanya umphunga kwimimiselo yeemveliso zecuba, ezenza kube lula ukumisela irhafu yokohlwaya kubathengi. Ngokomzekelo, xa iIndonesia yahlawulisa i-e-cigarettes iirhafu ezingama-57, igosa lezobuphathiswa lezezimali lacacisa ukuba injongo yale rhafu “yayikukunciphisa umsi wokusetyenziswa komphunga.”
Ukuphuphuma koluntu kumazwe amaninzi kuthintelwe njengokutshaya iisigarethi, kakhulu njengaseMelika. Ukuba uyazibuza ukuba ungavota na esidlangalaleni, ungabona enye i-vaper okanye utshaye kwaye ubuze (okanye isenzo) yintoni le mithetho. Xa ungathandabuzeki, musa ukuyenza. Apho ukuphuphuma komthetho kungekho semthethweni, kungcono uqiniseke ukuba imithetho ayizukunyanzeliswa ngaphambi kokuba uqale ukukhukhumala.
Zivinjelwe okanye zithintelwe phi iimveliso zomphunga?
Uluhlu lwethu lubanzi, kodwa mhlawumbi alunakuchazwa. Imithetho iyatshintsha rhoqo, kwaye nangona unxibelelwano phakathi kwemibutho yokuxhasa luyaphucuka, akusekho ndawo iphambili yolwazi malunga nemithetho yomphunga kwihlabathi liphela.Uluhlu lwethu luvela kwindibaniselwano yemithombo yolwazi: Ingxelo yokuNcitshiswa kweTuba yokuNgcitshiswa kweTuba evela kumbutho waseBritane wokunciphisa ubundlobongela Ulwazi-Ukutshintsha isenzo, uMkhankaso wewebhusayithi yokuLawulwa kweTuba yaBantwana abangaThengi, kunye neWebhu yoLawulo lweTuba yeHlabathi eyenziwe nguJohns. Abaphandi beYunivesithi yaseHopkins. Ubume bezinto ezithiles yagqitywa luphando lwantlandlolo.
Amanye ala mazwe anqandwe ngokungqalileyo ekusebenziseni nasekuthengiseni, uninzi luyekisa ukuthengisa, kwaye abanye banqabela kuphela inicotine okanye iimveliso eziqukethe inicotine. Kumazwe amaninzi, imithetho ayihoywa. Kwabanye, bayanyanzeliswa. Kwakhona, jonga kwindawo enokwethenjelwa ngaphambi kokuya kulo naliphi na ilizwe elinamafutha kunye ne-e-liquid. Ukuba ilizwe alidweliswanga, ukuphuphuma kuvunyelwe kwaye kulawulwe, okanye akukho mthetho uthile ulawula i-e-cigarettes (njengangoku kunjalo).
Samkela naluphi na ulwazi olutsha. Ukuba uyawazi umthetho otshintshileyo, okanye umgaqo omtsha ochaphazela uluhlu lwethu, nceda wenze uluvo kwaye siza kuluhlaziya olu luhlu.
Ukusetyenziswa ngokusemthethweni, ukuthengisa ngokungekho mthethweni
Ukuthengisa ngokungekho mthethweni, ngaphandle kweemveliso zonyango ezivunyiweyo
Ukusetyenziswa ngokusemthethweni, ukungenisa elizweni okanye ukuthengisa akukho mthethweni. NgoFebruwari 2020, uMongameli waseMexico wakhupha umthetho othintela ukungeniswa kwazo zonke iimveliso ezinyukayo, kubandakanya iimveliso ze-zero-nicotine. Kukho, nangona kunjalo, uluntu oluhlumayo kweli lizwe, kunye nobunkokeli bobhengezo liqela labathengi iPro-Vapeo Mexico. Akukaziwa ukuba urhulumente uza kuzama ukuthatha iimveliso eziziswe kweli lizwe ngabakhenkethi
Kukholelwa ukuba akukho semthethweni ukuyisebenzisa, akukho mthethweni ukuthengisa inicotine
Ukusetyenziswa ngokusemthethweni, ngokusemthethweni ukuthengisa-kodwa ukuthengiswa kweemveliso eziveliswe emva kuka-Agasti 8, 2016 akuvumelekanga ngaphandle komyalelo wentengiso ovela kwi-FDA. Akukho nkampani yomphunga efake isicelo soku-odola ukuthengisa okwangoku. Nge-9 kaSeptemba 2020, iimveliso zangaphambi ko-2016 ezingangeniswanga ukuba zivume ukuthengisa nazo ziya kuba semthethweni ukuzithengisa
Ukusetyenziswa ngokusemthethweni, okukholelwa ukuba akukho mthethweni ukuthengisa, ngaphandle kweemveliso zonyango ezivunyiweyo
Ikholwa ngokusemthethweni ukuba iyasetyenziswa, akukho mthethweni ukuyithengisa-kodwa imeko ayiqinisekanga
Kukholelwa ukuba akukho semthethweni ukuyisebenzisa, akukho mthethweni ukuyithengisa
Ukusetyenziswa ngokusemthethweni okukholelwa ukuba akukho semthethweni ukuthengisa
Ukusetyenziswa ngokusemthethweni, ukuthengisa ngokungekho mthethweni-nangona kunjalo, ilizwe labhengeza kwi-2019 injongo yalo yokwenza ngokusemthethweni i-e-cigarette
I-Bangladesh okwangoku ayinayo imithetho okanye imimiselo ekhethekileyo yomoya. Nangona kunjalo, ngo-Disemba ka-2019 igosa lezempilo laxelela iReuters ukuba urhulumente "usebenza ngenkuthalo ukunyanzelisa ukuveliswa, ukungeniswa kunye nokuthengiswa kwe-e-cigarettes kunye nayo yonke into yokutsala i-tobaccos ukuthintela umngcipheko wezempilo."
Ukusetyenziswa ngokusemthethweni, akukho semthethweni ukuthengisa iimveliso ezininzi
Ukuthintela: ukusetyenziswa ngokungekho mthethweni, ukuthengisa ngokungekho mthethweni
Ukholelwa ukuba uyavalwa
NgoSeptemba 2019, urhulumente ophakathi waseIndiya wakuthintela ukuthengiswa kweemveliso ezitshayo ngokuthe ngqo. Urhulumente, esazi kakuhle ukuba amaIndiya azizigidi ezili-100 atshaya kwaye icuba libulala phantse abantu abasisigidi ngonyaka, akazange enze naliphi na inyathelo lokunciphisa ukufikelela kwimidiza. Akunakwenzeka ukuba, urhulumente wase-Indiya ungumnini we-30 yepesenti yeyona nkampani enkulu yelizwe
Zisemthethweni ukusebenzisa, ezisemthethweni ukuthengisa izixhobo, akukho semthethweni ukuthengisa ulwelo oluqukethe inicotine (nangona abantu benokungenisa iimveliso eziqukethe inicotine kunye nezithintelo). Iimveliso zecuba ezishushu (i-HTPS) ezinjenge-IQOS zisemthethweni
Ukusetyenziswa ngokusemthethweni, ngokungekho mthethweni ukuthengisa iimveliso eziqukethe i-nicotine. Nangona ukuthengiswa kwabathengi kweemveliso eziqukethe i-nicotine akukho semthethweni, iMalaysia ineemarike ezikhulayo. Ngamaxesha athile abasemagunyeni baye bagqogqa abathengisi bathimba iimveliso. Ukuthengiswa kwazo zonke iimveliso eziphumayo (nangaphandle kwe-nicotine) akuvunyelwanga ngqo kwilizwe laseJohor, Kedah, Kelantan, Penang naseTerengganu
Ukholelwa ukuba uyavalwa, ngokusekwe kwinqaku lika-Agasti 2020
Ukusetyenziswa ngokusemthethweni (kuthintelwe esidlangalaleni), akukho semthethweni ukuthengisa
Ukuthintela: ukusetyenziswa ngokungekho mthethweni, ukuthengisa ngokungekho mthethweni. Ukuya kuthi ga kunyaka ophelileyo, ukuba nolwaphulo-mthetho kukohlwaywa ngokuhlawuliswa imali efikelela kwi- $ 1,500
Ukukholelwa ngokusemthethweni ukusebenzisa, akukho mthethweni ukuthengisa. I-Thailand izenzele igama ngokunyanzelisa ukungavunyelwa kwayo ukungenisa kunye nokuthengisa iimveliso ezinyukayo kunye neziganeko eziphezulu eziphezulu kule minyaka idlulileyo, kubandakanya nokuvalela abakhenkethi "bokungenisa elizweni". Urhulumente uxelwe ukuba uyayithathela ingqalelo imithetho yakhe engqongqo ye-e-cigarette
Ukukholelwa ngokusemthethweni ukusebenzisa, akukho mthethweni ukuthengisa
Ukusetyenziswa ngokusemthethweni, ukungenisa elizweni okanye ukuthengisa akukho mthethweni. Ukuthengisa kunye nokungenisa iimveliso ezitshisayo akukho semthethweni eTurkey, kwaye xa ilizwe laphinda laqinisekisa ukuthintelwa kwalo kwi-2017, i-WHO ikhuphe ukukhutshwa kweendaba kukhuthaza isigqibo. Kodwa imithetho iyaphikisana, kwaye kukho imarike evuzayo kunye noluntu olunentuthu eTurkey
Kusemthethweni ukusebenzisa, akukho semthethweni ukuthengisa inicotine. E-Australia, ukuphatha okanye ukuthengisa inicotine akukho semthethweni ngaphandle kommiselo kagqirha, kodwa ngaphandle kwelinye ilizwe (eNtshona Ostreliya) izixhobo ezishenxisayo zisemthethweni ukuthengisa. Ngenxa yeso sizathu kukho intengiso ye-vaping eqhubela phambili ngaphandle komthetho. Izohlwayo zobutyebi ziyahluka ukusuka kwelinye ilizwe ukuya kwelinye, kodwa kunokuba nzima kakhulu
Ukusetyenziswa ngokusemthethweni, ukuthengisa ngokungekho mthethweni-nangona ilizwe libonakala lisecicini lokulawula iimveliso zomphunga
Sebenzisa ulumkiso kwaye wenze uphando!
Kwakhona, ukuba undwendwela ilizwe ongaqinisekanga ngalo, nceda ujonge kwimithombo ekwelo lizwe malunga nemithetho kunye nezinto ezinokunyamezelwa ngabasemagunyeni. Ukuba usiya kwelinye lamazwe apho ukubanjwa kwemiphunga kungekho semthethweni- ngakumbi kumazwe akuMbindi Mpuma- cinga kabini malunga nokuzimisela kwakho ukuvota, kuba unokujongana neziphumo ezibi. Uninzi lwehlabathi lamkela umphunga kule mihla, kodwa ezinye izicwangciso kunye nophando zinokugcina uhambo lwakho olumnandi lungaguquki lube liphupha elibi.
Ipakethe yeBlister ye-cigarette, Isigarethi soLwelo esiTywala, Ukutshaya enye indlela, Newport E umdiza, Iicigarete zobushushu, Epen,